Dawladda Qadar oo ciidamo ka qoratay (qoranaysa) Soomaaliya (dhegayso) – Radio Daljir
Dawladda Qadar oo ciidamo ka qoratay (qoranaysa) Soomaaliya (dhegayso)
Febraayo 2, 2018 2:47 b 0
Muddooyinkan waxaa dalka Soomaaliya si weyn looga hadal-hayey ciidan qorasho dawladda Qadar ay qoranayso ciidamo Soomaali ah, arrintaas oo lala xiriirinayo xurgufta siyaasadeed iyo xiisadda u dhaxaysa dalalka Khaliijka.
Haddaba si aan wax uga ogaano ammuurtan waxa aan ka warraysaney Xasan Faarax Nuurre oo ah aabbe ku sugan magaalada Caabudwaaq, wiilkiisuna qortay ciidanka Qadar. Nuurre ayaa sheegay in arrintaas ay tahay biyo-kama-dhibcaan, dhallinyarada la askareeyey ee Qadar loo qaadayna uu kamid yahay wiil uu dhalay oo wakhti xaadirkan ku sugan xudduuda u dhexaysa Qadar iyo Sucuudiga.
Bilo kahor ayaa dhallinyaro Soomaaliyeed saas oo kale loo askareeyey, lagana soo qoray Xamar, Garoowe iyo Hargeysa, la isuguna geeyey Garoowe iyo Xamar, halkaas oo looga sii qaadey dalka Qadar. Tiro lagu qiyaasay 3,000 illaa 5,000 oo Soomaali ah ayaa hadda u qoran ciidanka Qadar, joogana dalkaas.
Xasan Faarax Nuurre waxa uu u warramay Axmed Sh. Maxamed “Tallman” oo ku sugan xarunta Daljir ee magaalada Caabudwaaq.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 490 Wararka 23889
Ciidamada dowladda iyo AMISOM oo howlgal ka fuliyay Diinsoor